AFIFAB/ Radio Fahazavana Toamasina – FJKM
Notokanana tamin’ny fomba ara-piangonana
ny Radio Fahazavana Toamasina
Tontosa ny Sabotsy 13 Oktobra 2018 lasa teo tao amin’ny Sekoly David Jones Anjoma Toamasina ny fitokanana tamin’ny fomba ara-piangonana ny Radio Fahazavana Toamasina, izay raisina amin’ny maridrefy 88.6 FM any an-toerana. Voatendry ho filohan’ny Komity ny AFIFAB Toamasina tamin’io fotoana io ihany koa Andriamatoa RAVELOMANAMPIRAIBE ANDRIAMAMPIANTONA, Mpitandrina, ary fitandremana maro eo anivon’ny Synodamparitany Toamasina Vavahadin’ny Filazantsara no handrafitra ireo mpikambana ao anatin’izany.
Fotoam-pivavahana no nentina nanamarihana izany fotoana sarobidy izany ka nitarika ny fotoana Andriamatoa RAKOTONDRAZANANY Handritiana, Mpitandrina sady Prezidà Synodaly any an-toerana. Nitory ny Tenin’Andriamanitra kosa ny Mpitandrina RAKOTONINDRAINY Jaona, Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana.
Raha tsiahivina fohy ny tantara, tamin’ny taona 2007 no nisokatra ny Radio Fahazavana tany Toamasina. Tamin’ny taona 2010 anefa dia nikatona izany ary izao niverina nisokatra izao indray. Faly sy ravo araka izany ireo vahoaka kristiana ao an-tampon-tanànan’i Betsimisaraka sy ny manodidina noho izao fiverenan’ny onjam-peo Fahazavana izao.